Posted by Lyndon deed	 6 Comments
Waa maxay xaaladda sharci ee Kratom ee Arizona State of sida 2014? Isticmaalka Kratom ee Arizona si degdeg ah kordhaya, iyo dad badan oo wax su'aalo ah oo ku saabsan sida nabad ah, legal, iyo geedo yaryar oo wax ku ool ah waa. Macluumaadka soo socda ogaan doono qaar ka mid ah oo ku saabsan Kratom iyo adeegsigeeda Arizona. Iibso Kratom Online halkan Ganacsato talinayo.
Waa maxay Kratom?
Arizona ee isticmaalka faraha-badan ee daweynta dhirta keenaysaa in danaha dhabta kratom. Jiidashada ugu weyn ee aan geedaha taasi waa sida waxa uu soo saaray: iyada oo loo marayo beeralayda maxaliga ah ka go'an in ay soo saara geedo tayo sareeya iyo ma xarumaha qaybinta dheehanyahay.
Sidaas, Halkee ayuu Kratom ka yimaadaa? Kratom ka timaada geedka Mitragyna Speciosa ah ee koonfur bari Asia. Dhalatada koraa adiga oo aan lagu beerayaa, iyo caleemaha geedaha ka qaan waxaa la doortay iyo qiimeeynayo ku salaysan tayada si loo hubiyo in kaliya kuwa ugu fiican gaarto macaamiisha ee Arizona. Caleemaha shaaxid way engegeen oo da'ayey budeeyey ah ama sameeyey galay shaah ah. Goosashada ee geedo yaryar oo tan ayaa soo socday qarniyo la taariikh dheer oo isticmaalka amaan ee wadanka oo Thailand.
Ma Kratom Legal ee Arizona?
Kratom waa sharci in qayb kasta oo ka mid ah Arizona, taasoo la micno ah ma jiraan xadidaad ku saabsan inta aad ku baabbi'iyee karaa iyo sida ay uga iibsan kartaa. Inkastoo Kratom loo arkaa mid ah geedaha oo dhab ah in meelo badan oo adduunka ah, waxaa jira weli dalalka qaar in ay mamnuucaan wadajir ajandaha siyaasadeed ee. Bishii February 2014, waxaa jiray cod ee sharci-dejinta gobolka Arizona yeelan kara Kratom dhigay sharci darro in la isticmaalo ee gobolka. Si kastaba ha ahaatee, daqiiqadii ugu danbeysay, Mitragyna Speciosa iyo alkaloids ay laga saaray biilka taas oo muujinaysa in gobolka ay ka go'an tahay in ay u hayo sharci ah ugu yaraan mustaqbalka dhow.
Hagaha Gadashada Kratom
Halkan waxaa ku qoran dhowr talooyin u user cusub oo la hafin karaa kala duwan ee wax soo saarka kratom halkaas. Bilow, ogahay in Kratom loo aqoonsaday by midabka caleen iyo gobolka waxaa ka yimid. Gobolka kastaa wuxuu leeyahay warshad leh ay mix u gaar ah oo guryaha, laakiin midabka caleemaha sida caadiga ah wuxuu tilmaan wanaagsan oo ah sida geedo yaryar oo inta badan ku shaqayn doonaan. Caleemo Red waa weyn ee soo saara nasashada. Caleemo White u fiican yihiin katartaa tamarta iyo shakhsiyadda kobcinaya, iyo caleen cagaaran u egtahay in la isu geeyo dhamaan tayooyinka of caleemo cad, iyo kuwo gaduud.
Talo soo jeedintii: Users New in Arizona guud ahaan ku bilaw ku dhaawac Red Bali, Kaas oo siiya user oo dhan faa'iidooyinka Kratom. Waxay la kulmaan dhiirogelin, gargaarka Cinaba, tamar badan, xanuun iyo murugo gargaarka, iyo welwel lahayn. Waa fikrad wanaagsan in la iibsado budo si joogto ah xoog ugu horeysay oo ka fogaada Champions Leauge oo ay tahay in kaliya loo qoondeeyo users khibrad.
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala cusub u muuqdaan in ay doonayaan in nooc la saamaynta ugu xoogan. Si loo ogaado in, aad u baahan tahay in la sameeyo kala duwan oo sahamin balaadhan oo ah nooc ka heli karaa iyada oo loo marayo kratom bulshada online. Sida hore loo sheegay, warshad kasta waxay leedahay mix u gaar ah oo saamayn, ka Malaysian in Sumatra Kratom. Habka keliya ee si aad u ogaatid dhaawac sax tahay inuu ku tijaabiso iyo cilmi ka hor macaamiisha views on halleynta. Fiiri boggayaga tusmo saamaynta nooc Kratom halkan.
Halkee si aad u hesho For Sale
Thanks to ah iibiya kalsoonaan karo Kratom online Maraykanka, Dadka deegaanka Arizona raaxaysan karaan fududahay in doogga helaan. Mid ka mid ah iibiya xusid mudan, Arena Ethnobotanicals sidaas sameeyo oo dhan dhoofinta alaabta Asian farsamo aad u, uma baahnid inaad wax laga walwalo in. Sidoo kale waxay leeyihiin isku maraakiibta maalin, taas oo macnaheedu yahay waxaad ku heli kartaa adiga oo Kratom dhowr maalmood gudahood ka dib geliya amarkaaga (ma gaar ahaan tan ay leeyihiin in aad walwasho ku saabsan arimaha dhoofinta).
Waxaad kala dooran badan oo uu ka soo xusho marka ay timaado Kratom: budo, tinctures awood, iyo doodii dareere. A dukaan wax dhirta xirfad leh ugu jeclaan doono isku day noocyo kala duwan oo nooc si aad u hesho kaas oo mid ka mid habboon isaga ama iyada ugu fiican. Wax macno ah ma haddii aad tahay user cusub ama halyeeyga sababtoo ah waxan keliya: Kratom noqon doonaa adduunka caan ku ah geedo yaryar oo si faa'iidadiisa caafimaadka ididiilo mahad.
Waa Legal Iibsashada Kratom UK?